नेपाली कलालाई सरकारले नै नजर अन्दाज गरेको छ – Hotpati Media
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:४३ मा प्रकाशित (11 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ९ मिनेट
कास्की जिल्लाको सुन्दर नगरी पोखराको सैनिकवस्तीमा जन्मेका एन.बि.गुरुङ स्वभावत लजालु व्यक्ति हुन् । सानैदेखि चित्र कोर्न रुचाउने गुरुङले वरीष्ठ कलाकार आलोक गुरुङसँग औपचारिक शिक्षा लिएसँगै खारिने मौका पाए ।
विगत बाइस वर्षदेखि कलाक्षेत्रमा रंग खेलाईरहेका छन् । सबैभन्दा गाह्रो माध्यम मानिने जलरङको कुची चलाउने कलाकार गुरुङले युके, इन्डिया, कोरिया र काठमाडौँमा गरी ५ पटक एकल चित्रप्रदर्शनी र देशविदेशमा सयभन्दा बढी सामूहिक कला प्रदर्शनी गरीसकेका छन् ।
डेढ दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार पाएका उनले क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रादेशिक पुरस्कार, हेमगंगा युवा प्रतिभा पुरस्कार, सिर्जनशील युवा प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित भैसकेका छन् ।
कलाकार गुरुङसँग हटपाटीका लागि ऐश्वर्य श्रेष्ठले गरेको लकडाउनमा कला र सिर्जनाका कुरा प्रस्तुत गरेका छौं ।
एउटा कलाकार जस्तोसुकै परिस्थतिमा पनि कलामा रमाउँछ लकडाउनमा तपाईको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
कोरोना भाईरसको महामारीले बिश्व अक्रान्त छ नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नहरने भन्ने प्रश्नै रहेन। हामी कलाकार पनि त्यसको शिकार भएका छौ यधपि हामी कलाकारलाई एकान्त र प्रशस्त समयको आवश्यकता पर्ने हुनाले यो लकडाउन वरदान सावित बनेको छ। यो समयलाई कला श्रृजना गर्ने ,कलाका विविध पक्षलाई अबलोकन गर्ने र कलाका पुस्तक पढ्ने अबसरको रुपमा लिएको छु। यिनै काममा लकडाउन सदुपयोग गरिरहेको छु।
फुर्सदमै हुनुहुन्छ होला कोरोना भाइरसले कला क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
कलाका अधिकांश क्रियाकलापहरु ठप्पै जस्तै बनेका छन। नेपाली कलाक्षेत्रलाई कोरोना भाईरसको महामारीले दुरगामी असर पार्ने निश्चित छ। त्यसै गरि कलाका बिक्री बितण रोकिएको छ। कलाकार,कला व्यापारी र कला संग्रहकर्तालाई यस्ले नराम्रोसंग पिरोलेको छ।
नेपालमा कलालाई बुझने कलापारखी कम छन् भनिन्छ, विश्वबजारमा नेपाली कलाको माग कस्तो छ ?
निश्चितरुपमा नेपालमा कलापारखीको कमि देखिन्छ। यसको कारण सरकारी निकायद्वारा कलाको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको छ। सरकारी लेबलमा कलाको कुरा निकै कम गरिन्छ। विद्यालयमा कलाको पठनपाठन निकै कम मात्रमा हुने गरेका छन, त्यसैले हामी कहाँ कला कमजोर हुनै नै भयो। तर विदेशमा यस्को ठिक बिपरित छ। विदेशमा कलाका बारेमा स्कुल लेभलदेखि चर्चा हुने गर्छ। ठुला ठुला मन्चमा कलाको चर्चा र कलाको लिलामी हुने गर्दछ। विदेशमा नेपाली कलाको माग र बिक्रीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने निकै कम मात्रमा हुने गरेको छ । यधपि नेपाली काष्ठकलाका सामाग्री र थाङ्काकलाको माग सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिन्छ किनकी यी कलाले हाम्रो परिचय र मौलिकतालाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
तपाईको जलरंग अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मुल्य कतिमा बिक्री भएको छ ?
खासगरी नेपालमा जलरंग कला सबैभन्दा गाह्रो र चुनौतीजनक काम भएता पनि अन्य माध्यम भन्दा कम मुल्यमा बिक्रिबितरण हुने गरेको छ । कारण जलरंग कागजमा बनाईएको हुन्छ र यो कम टिकाउ हुने आमधारणा छ तर त्यसो होईन । कागजका पनि प्रकार हुन्छन। बिश्वबजारमा कपडाबाट बनेका क्यानभास जस्तै बलिया कागज पनि उपलब्ध छन्। मेरा जलरंग चित्रहरु नेपालमा रु.३०/४० हजारमा बिक्री हुने गरेतापनि बिदेशमा राम्रै मुल्यमा बिक्री हुने गरेका छन। अहिलेसम्म मेरो जलरंग चित्रको सबैभन्दा महंगो नेपाली ३ लाखसम्म बिक्री भएको छ। तर कलाको बिक्रीको कुरा गर्दा यो सधै तरकारी बिक्री भए जस्तो भने हुदैन।
तपाई देशविदेशमा कलाप्रर्दशनीमा हिडीरहनुहुन्छ यो क्षेत्रमै लागेर जिउन कतिको सहज छ ?
अहिलेसम्म कला गरेरै बाचिएकै छ। देशविदेश घुमेकै छु।कलाकारिता बाहेक अरु क्षेत्रमा अहिलेसम्म जानु परेको छैन। सन्तोषजनक नै छ भन्नुपर्छ।
नेपालमा कलाकारको लागि कलामा उतार्न विषयवस्तु अनेकन छ तपाई जलरंगमा कस्ता कस्ता विषयवस्तुलाई बढी प्राथमकिता दिनुहुन्छ ?
स्वभाविकरुपमा मेरो जन्म र कलाको स्कुलिङ सुन्दर नगरी पोखराको मनमोहक प्रकृतिक छटामा भएकाले प्रकृतिका बिषय बढी हुने गरेका छन। त्यसको अलवा मुहार चित्र, अर्ध-अमुर्त र अमुर्त कला सृजना पनि गर्ने गरेको छु।
यो क्षेत्रमा लाग्न चाहने कलाप्रेमीलाई तपाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अहिलेको बिश्व एउटा गाऊँजस्तै बनिसकेको छ । यहाँ अवसरको ठुलो खानी नै छ। जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेतापनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले कलाक्षेत्र पनि अपबाद हुन सक्दैन। यस क्षेत्रमा आउन चाहना हुनेहरुले भविष्यको चिन्ता गर्नु पर्दैन तर ईच्छाशक्ति, मेहनत अध्यन र लगनशिलताको भने जरुरत पर्दछ। कलाकारिता सिक्ने र कलाकार बन्ने सपना देख्नु भएको छ भने यो क्षेत्रमा ढुक्क भएर आउन सल्लाह दिन चाहन्छु।